WatchOS 3 uye tvOS 5.2 beta 12.2 yevagadziri | Ndinobva mac
Mushure mezuro neshanduro ye beta ye macOS Mojave 10.14.4 yakavhurwa naApple, nhasi kwaive kuchinjika kwemamwe ese masisitimu ekambani uye vagadziri vatove navo watchOS vhezheni 5.2 uye tvOS 12.2 beta 3. Zviripachena iyo iOS 12.2 beta inoonekwawo kumberi.
Saka svondo rino kambani yeCupertino yakashandura matafura nekutanga kuburitsa beta vhezheni yemacOS uyezve neshanduro dzakasara zuva rinotevera, tinowanzove nemabhesi eIOS, tvOS uye watchOS zvisati zvaitika. Iva zvazvingaita, nhau dziri mushanduro idzi dzevagadziri dzinoshomeka kupfuura iyo kugadzikana kwesisitimu uye kugadzirisa kugadzirisa, kunyangwe yeWOSOS zvinonzi kune akasarudzika dials evashandisi vewatch ine tambo dzeHermès.
Kugadziridzwa kwakawanda mukuita, kugadzikana uye kuchengetedzeka kwemasisitimu nevamwe asi zvadaro tinazvo matambudziko nemaapple native seFaceTime uye kudana kweboka, izvo zvinoita kunge zvisina kugadziriswa zvakakwana sezvatinoona mune ino chinyorwa kubva kune mumwe wedu Nacho. Chero zvazvingaitika, chinhu chakakosha ndechekuti idzi beta shanduro dzinodzikamisa iyo system uye zvinoita sekunge kupfuura chinetso cheFaceTime, zvese zvinenge zvichitongwa.
Sezvo isu tanga tichinyevera kwemazuva, mavhezheni matsva eApple haawedzere shanduko dzakakosha mukushanda kwesystem sezvo ivo vaizochengeterwa ipa zvese paWWDC yegore rino. Mukutaura, nhau dzinouya dzichidonhedza uye dzakanangana neIOS nekuuya kweAirPlay 2 paTv uye iyo nguva nenguva Memoji, mamwe ese kungori kuvandudza mukuita uye kuchengetedzeka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS 3 uye tvOS 5.2 beta 12.2 yevagadziri
Kutengesa kwePodPod kunoramba kuchikura zvishoma nezvishoma